VLC 2.0 horeyba waxay u leedahay RC (iOS, Android, Mac, Linux & Windows) | Laga soo bilaabo Linux
VLC 2.0 horeyba waxay u leedahay RC (iOS, Android, Mac, Linux & Windows)
VLC Waa ciyaaryahankaas dhameystiran, laakiin wuxuu leeyahay "wax" taas oo iga dhigeysa inaanan isticmaalin. Ma dhahayo way ka fiican tahay ama ka xun tahay kuwa kale, waxaan si fudud u aqoonsanayaa inay wanaagsan tahay, aad u wanaagsan tahay, aad u fiican, laakiin weli waxaan jeclahay inaan inbadan isticmaalo SMPlayer.
Waxay soo baxday in RC-kii ugu horreeyay (Musharrax La Sii Daayay) ee VLC nooca 2.0 uu hadda soo baxay, xitaa waan soo dejisan karnaa oo tijaabin karnaa: Soo dejiso VLC v2.0 RC1
Kuwa ugu farxad badan ee noocan ah waxay noqon doonaan kuwa isticmaala Mac, maaddaama interface-ka uu si weyn ugu beddelay iyaga:
Waxaad ka arki kartaa shaashado badan oo VLC 2 ah Mac halkan: feepk.net
By habka, naqshaddan cusub waxay ka timid Damien Erambert.
Nooca loogu talagalay Windows ma heli doono isbeddelo badan oo dhinaca muuqaalka ah, wuxuu yeelan doonaa nooc 64 jajab ah markii noocaan 2.0 ee VLC loo arko inuu deggan yahay.
Intaas waxaa sii dheer, nuqulkan cusub waxaad kuheleysaa kumbuyuutarkaaga oo keliya, laakiin sidoo kale qalabkaaga mobilada 😀 Hagaag, wuxuu yeelan doonaa nooc loogu talagalay Android iyo sidoo kale macruufka.
Isku soo wada duuboo, waxaan ka dhex heli doonnaa kuwo kale, khalkhal-hoosaad cinwaan cusub ah, taageerida faylal badan oo ku jira hal feyl oo RAR ah, Mac-na waxay ku yeelan doonaan UI cusub iyo sidoo kale taageerida Blue-Ray
Haddayna intaas ku filnayn, VLC hadda waxay leedahay taageero loogu talagalay addons lagu sameeyay LUA - » LUA VLC Addons
Ka waran VLC Linux? ...
Hadda waxaan soo degsaday nuucaan cusub 😀…
Waxaan isku dayay inaan rakibo anigoo ka bilaabaya qaabeynta fudud, laakiin qalad bay i siisaa ... ma jiraa qof fikrad ka qaba sababta? (Khaladaadka halkan ayaan ku dhaafayaa):
hubinaya MINIZIP… maya
hubinta adeegsiga unzip.h… maya
hubinta unzip.h joogitaanka… maya
hubinta unzip.h. maya
hubinta DBUS… maya
habayn: khalad :.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » VLC 2.0 horeyba waxay u leedahay RC (iOS, Android, Mac, Linux & Windows)
Sababaheyga aan u adeegsan waayey VLC waa: isma dhexgalaan sidoo kale KDE (ama Gnome) sida SMPlayer oo leh astaamaha Oxygen mana jiidi kartid ciyaaryahanka shaashadda (wax yar oo aan jeclahay inaan isticmaalo, waa wax aad u fiican raaxo leh in daaqadda laga qabto labada dhinacba).
Runtii waan jeclahay interface-kaas Mac waana iga yara xanaaqsan tahay in dadka isticmaala GNU / Linux ay had iyo jeer kaalinta saddexaad ka galaan mudnaanta mashaariicda barnaamijyada bilaashka ah ee iskutallaabta ... laakiin haye, adiga oo kale, ma dafirayo tayada ciyaaryahanka Ujeeddadayduna ma ahan inaan sumcad xumeeyo shaqadooda.
Haa, dhab ahaan muuqaalka muuqaalku wuxuu saameyn ku yeeshaa go'aamadeenna, marar badan sidan waa sida aan u jecel nahay ama aan u ahayn 🙂
Wax badan oo loogu talagalay dadka isticmaala KDE, ee loo bartay jawi qurux badan, codsiyo la safeeyey, faahfaahin fiican haha
Salaan iyo soo dhawow 😀
Waxaan ku rakibey Chakra, laakiin wax walba si sax ah ayey u shaqeeyeen, waxa kaliya ayaa ah inay qaadatay waqti dheer.
Laakiin way shaqeysay, wax qalad ahna ma helin.
Waxaad ku qori kartaa qoraalka 'qaabeynta' halkan: http://paste.desdelinux.net/ ?
Aan aragno waxa cadaabku dhacayo oo aanan rakibi karin haha.
Oh, miyaad ku rakibtay qaabeynta + samee + samee rakib, ama adoo adeegsanaya repos ama wax?
Salaan iyo mahadsanid 😀
Waan ka xumahay laakiin qorista ./ qaabeynta ayaa aad u dheer.
Oo haa ku rakib:: / qaabee, samee, samee rakib (xidid) iyo ./vlc (caadi ah)
Ok ha walwalin, waad mahadsantahay si kastaba 🙂
gaaaara, rakib furaha iyo dbus. ka raadi bakhaaradaada. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay.
Suurtagal, tani waa waxa aad tilmaamayso, waan xaqiijiyay waana labadaba rakibay.
Taasi waa dhibaatada T_T ... haa waan furfuray oo rakibay, iyo sidoo kale dbus, haddii aanan haysan tan rakibtay, wax KDE ah ma shaqeeyaan T_T ...
Fuck, oo leh khiyaaliga igu kalifay inaan isku dayo 🙁
Waan baaray AURs laakiin noocaani wali ma jiro.
ma cadda .. noocyada gaarka ah ee soo saarista jeegga .. waxaa ku yiri "-dev"; marar badan ayay yihiin. Qaar kalena waa nooc. Ami tusaale ahaan wuxuu i weydiistay LUA, waxaan rakibay lua ka dibna waxaan ku sii waday isla sidaas, si fiican ayaan u aqriyaa wax soo saarkana waxaa ku qoran lua5.1 .. rakib ... sidaasna waad ku socotaa .. haha ​​..
Haddii isticmaale daaqadaha la barbar dhigo .exe wuxuu kuu dirayaa antipodes-ka.
PS: isnadaamiska raaxada ma cuncun !!
Haa, laakiin waxaad ubaahantahay waa dbus devs iyo unzip-ka, haday debian ahaan laheyd waxay oran laheyd tusaale: libdbus-1-dev, laakiin qaanso ahaan wax fikrad ah kama haysto waxa uu magaca noqon lahaa.
Jawaab ku samee booqashada
Oh ok, waan ku raadin doonaa si aad u aragto sida ay u dheer tahay
Waad cusbooneysiin kartaa interface-ka xoogaa ah Linux / Windows, hadda waxaan u isticmaalaa umplayer labadaba maxaa yeelay waxay umuuqataa mid qurux badan.
Waxaan ku haystay OpenSUSE [VideoLan repo] dhawr maalmood oo si fiican ayey u shaqaysaa, kan aan jeclahay.
Macmiilka Android weli wuxuu ku jiraa beta xiran, sax?
Ku jawaab thc
Waxay ahayd inaan ururiyo anigoo adeegsanaya "samee CXXFLAGS + = - faafid" Hadday i siin weyday qalad nooca beddelaadda.
Weli waan u kari waayey inaan qaado tallaabadaas, ma dhaafi karo ./qeex
Waxaa loo maleynayaa in dbus-core ay bixiso madaxyada, laakiin galka /usr/include/dbus-1.0/dbus/ galka waana inay galaan / usr / include / dbus /
Sidoo kale kan ugu dhiirran, waxaad kala soo bixi kartaa noocyada habeen kasta nidaam hawlgal kasta, xitaa waxaa jira ppa Ubuntu waxaan qabaa. http://nightlies.videolan.org/
Isla waa nooc 2.0 sidaa darteed way u qalantaa. rc1 wuxuu i siiyay khaladaad, laakiin habeenki ma sameynin.
Si aan ugu rakibo Mint 12 waxay ahayd inaan ku daro kaydinta nooca xasilloon "maalin walba":
sudo add-apt-repository ppa: videolan / xasilloon-maalinle ah
sudo apt-get update && sudo apt-get rakib vlc
Iyo voila, wax kasta oo u shaqeeya sidii soo jiidasho dhibaato la'aan.
Waa maxay interface xarrago leh. Taasi waa waxa aan ugu jeclahay Mac.
Mid xado oo jooji sidaad "cajaa'ib" u leedahay mac-hadku, kaas oo habka, uu yahay midka ugu yar ee halkaa lagu habeyn karo
Qofka noloshiisa ku bixiya taabashada ukunta waa adiga. Waxaan horeyba u ognahay inaadan jeclayn Ubuntu, ama Mac, ama Shuttleworth, ama dumarka.Qof walba ma inuu isku mid ahaadaabaa? Kaalay, tag qaado cu **
Jooji wasakhda naagaha, horay ayaan si aad ah ugu cadeeyay, ma doonayo inaan cid wax yeelo.
Waxa iga xanaajiya ayaa ah inaad dhahdo bulsh, Mac waa 0 habeyn (waxaad dareemi doontaa isku xirnaan), sidoo kale deegaan kasta oo Linux ah oo leh mowduucyo wanaagsan ayaa ka qurux badan Mac, gaar ahaan haddii ay tahay KDE
Waad ku mahadsantahay faahfaahinta 😉
Muuqaal cusub oo qurux badan, waa sida ay u egtahay aniga Mac OS X Lion 🙂
Markaa waxay ka cawdaan kuweenna adeegsada daaqadaha LOL!
Yoyo sidoo kale waa inuu laalaadaa
Ubuntu runti miyuu luminayaa dhulka Linux Mint?
Warka sheegaya in Windows 8 uu keenayo (wax kasta oo u eg Linux waa iska soo horjeed ...